1. Programme on Let's sing Japanese Songs has started at JCH. 2. Woman Fashion Magazine Cam Cam at JCH introducing make-up application in the latest publication. 3.A book donated by Mr.Kohei NISHIKAWA at JCH provides comprehensive and fascinating Japanese musical instruments. 4.A demonstration of how to make green tea (plain tea) by Sensei Kobatake at JCH
Programme on Let's sing Japanese Songs has started at JCH
Let's sing Japanese Songs はじまりました。
Woman's Fashion Magazine Cam Cam
Comprehensive and fascinating Japanese musical intrument Book
ဒီဇင်ဘာလတွင် JCHမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ "ဂျပန် ကျော်ပလွေ တီးမှုတ်ဖျော်ဖြေပွဲ"မှ ကျော်ပလွေဆရာ Mr.Kohei NISHIKAWA က လှုဒါန်းပေးသွားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် တူရိယာရဲ့ဆွဲဆောင်အားအကြောင်းကို နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ လေ့လာသင်ယူခဲ့တဲ့သူတွေကို မေးမြန်းထားတဲ့ အင်တာဗျူး စသော အမျိုးမျိုးသော ရှုထောင့်မှ ဖတ်ရလွယ်၊ နားလည်ရလွယ်ကူအောင် ရေးသားထားပါတယ်။ ဆက်ဆက်လာရောက်ဖတ်ပေးပါ။
The demonstration of how to make green tea (plain tea) by Sensei Kobatake
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ရက်(စနေနေ့)တွင် Japan Culture Houseမှာ ဆရာမ Kobatakeမှ ရေနွေးကြမ်းပြုလုပ်ပုံကို သရုပ်ဖော်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက်မှာတော့ ပါဝင်သူများအသီးသီးမှ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေနွေးကြမ်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အားလုံးပဲ အရသာကောင်းတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြုလုပ်ရတာကို ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။
2月17日（土）Japan Culture Houseでは、小畠先生に茶道のお手前を披露していただきました。お点前を拝見した後、参加者はそれぞれ自分でお茶を点てました。みなさん、「おいしい。」と言って、茶道体験を楽しんでいるようでした。